Nika-iPrairie State Iinkonzo zezoMthetho
Fowunela ukunikela ngomnxeba:
Cofa indawo ethi "NIKELA NGOKU" ngezantsi
Thumela ngeposi ku:
Umama obaleka ukuphathwa gadalala ekhaya, usapho olujamelene nokugxothwa, okanye igqala eliphulukana nezibonelelo zakhe: ngokunika iPrairie State Iinkonzo zezoMthetho, udibana negqwetha lethu kunye nabasebenzi ukunceda abamelwane bakho abaswele kakhulu. Apha ngezantsi zimbalwa zeendlela onokuthi uhlanganyele nathi:
Ngokunika inyanga nenyanga, ubonisa ukuzibophelela kwakho okuqhubekayo kwimishini yethu yokubonelela ngokufikelela kubulungisa. Xa unika inyanga nenyanga, imali oyikhethileyo iza kutsalwa ngokuzenzekelayo kwiakhawunti yakho ngomhla okhethe ngawo.
Intsebenziswano / inkxaso-mali yonyaka
Ukuba ishishini lakho okanye ifemi yomthetho inomdla wokuxhasa enye yeziganeko zethu ezininzi zalapha ekhaya, thumela i-imeyile kuJennifer Luczkowiak, uMlawuli woPhuhliso, apha [imeyile ikhuselwe].
Isitokhwe / IRAS
Izipho zokhuselo kukudluliselwa kwesitokhwe, iibhondi kunye nolunye ukhuseleko, ngakumbi ezo ziye zonyuka ngexabiso. Ukuze ufumane imiyalelo yokwenza isipho sokhuseleko kwiPrairie State, nceda unxibelelane neOfisi yoLawulo loRhulumente wePrairie ku (815) 965-2134.
Unokunikela kwiPrairie State ngembeko okanye kwimemori yesiganeko esikhethekileyo okanye umntu.
IINKQUBO ZOKUTSHANTSHA ISIPHO
Ukuba umqeshi wakho utshatisa izipho, unokuphinda kabini okanye uwuphindaphinde kathathu umnikelo wakho. Iinkqubo zesipho sokutshatisa zihlala zihambelana nayo yonke ipesenti okanye ipesenti yeminikelo yabasebenzi kwimibutho yesisa. Nxibelelana nabasebenzi bomqeshi wakho ukuze ufunde ukuba banikezela ngenkqubo yesipho esifanayo.
Isibonelelo somyolelo sisiteyitimenti esilula kumyolelo wakho esinika iPrairie State nayiphi na kwezi zinto zilandelayo:
Inani elithile ledola,
Ipesenti echaziweyo yelifa lakho,
Inxalenye ethile yearhente yokuthengiswa kwezindlu (njengekhaya okanye isakhiwo sentengiso),
Ipropathi yakho enexabiso, njengomsebenzi wobugcisa.
Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nokunikwa okucwangcisiweyo, thumela i-imeyile kuJennifer Luczkowiak, uMlawuli woPhuhliso, apha [imeyile ikhuselwe].
Unako ukukhuthaza iPrairie State ngokusithanda kuFacebook okanye ngokusilandela kwi-Instagram nakwi-Twitter. Xa usabelana ngezithuba zethu, ukhuthaza injongo yethu yokubonelela ngokulingana kwezomthetho ngokwazisa usapho kunye nabahlobo bakho kwiinkonzo esizibonelela kubamelwane babo abasweleyo. Unokwenza i-fundraiser yezentlalo yoluntu egameni lethu.
IIKOMITI ZOKUXHASA NGEZIMALI
Abantu abaninzi banikela ngexesha labo kwiPrairie State ngokusebenza kwikomiti yengingqi yokunyusa imali. Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nokusebenza kwikomiti yokunyusa ingxowa-mali, thumela i-imeyile kuDaniel Nord, uMphathi weNkxaso yoLuntu, e [imeyile ikhuselwe].
Xa uthenga iAmazon Smile, iAmazon iya kunikela ngenxalenye yentengo yakho kwiiNkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie. Ukufunda ngakumbi kunye nokuthenga, ndwendwela Uncumo lweAmazon.
Ukuba unemibuzo malunga nayiphi na kwezi ndlela zokupha, nceda unxibelelane:
UJennifer Luczkowiak, uMlawuli woPhuhliso e (224) 321-5643
Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo kwaye izipho zixhuzulwa irhafu phantsi kwecandelo le-IRS 501 (c) (3). Zonke izipho zifumana ukuvuma okubhaliweyo kwaye abanikeli bayaboniswa kuthi Ingxelo yinyaka. Izicelo zokuhlala ungachazwanga ziyahlonitshwa.
Ngaba umnikelo uye kwiPrairie State Legal Services unqunyulwe irhafu?
Ewe, igalelo litsalelwa irhafu; Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie ngumbutho wesisa phantsi kweKhowudi yeNgeniso yangaphakathi yecandelo 501 (c) (3).
Ndingawenza umnikelo wokuxhasa iofisi yePSLS yalapha?
Xa kunokwenzeka, iPrairie State iyalela iminikelo kwiofisi yenkonzo yasekuhlaleni kwindawo apho iminikelo ivela khona. Ungasisa isipho sakho kwiofisi engaphandle koluntu lwakho ngokubonisa iofisi oyikhethileyo.
Yaziwa njani iminikelo?
Yonke iminikelo yamkelwe kwi Ingxelo yinyaka. Iminikelo eyenziwe nge Iphulo leeNkonzo zoMthetho zihlala ziqwalaselwa kwiminyhadala yoMkhankaso, kwiijenali zombutho wabameli kwaye ngamanye amaxesha kumaphephandaba asekuhlaleni. Izipho zinokwenziwa ngembeko okanye kwinkumbulo yezihlobo, usapho okanye abantu osebenza nabo. Izicelo zokuhlala ungaziwa ziyaziswa.
Ndiza kufumana isiqinisekiso somrhumo wam?
Umrhumo ngamnye wamkelwa kwileta emfutshane emva kokufumana isipho. Qho ngonyaka kuJanuwari sithumela umnikeli ngamnye isishwankathelo sazo zonke izipho ezenziwe ngumnikeli kunyaka ophelileyo.
Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie, Inc. zixhaswa ngemali, ngokuyinxenye, liQumrhu leeNkonzo zezoMthetho (LSC). Njengemeko yenkxaso-mali eyifumanayo evela kwi-LSC, ithintelwe ukubandakanyeka kwimisebenzi ethile kuwo wonke umsebenzi wayo wezomthetho-kubandakanya umsebenzi oxhaswa ngeminye imithombo yenkxaso-mali. I-Prairie State Legal Services, Inc. ayinakho ukuchitha imali ngayo nayiphi na imisebenzi engavunyelwanga ngumthetho we-Legal Services Corporation, i-42 USC 2996, et. seq., Okanye ngoMthetho kaRhulumente 104-134, §504 (a). Umthetho kaRhulumente 104-134 §504 (d) ufuna ukuba isaziso sezithintelo sinikwe bonke abaxhasi beenkqubo ezixhaswa ngemali liQumrhu leeNkonzo zoMthetho. Nceda unxibelelane neOfisi yoLawulo ku (815) 965-2134 ngolwazi oluthe kratya malunga nokuthintelwa.
iiyure 7 eyadlulayo